Farmaajo wuxuu ku dheganyahay kiiska Ikraan – Mahad Salaad | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo wuxuu ku dheganyahay kiiska Ikraan – Mahad Salaad
Xildhibaan Mahad Salaad, oo ka mid ah shaqsiyaadka uga galaangalka badan siyaasiyiinta Muqdisho, ayaa xaqiijiyay in Farmaajo diiday in kiiska Ikraan looga leexdo garsoorka dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ahaa Baarlamaankii 10-aad ee waqtigu ka dhamaaday, si weynna ugu dhow Xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, ayaa sheegay in Farmaajo dalbaday in kiiska Ikraan Tahliil maxakamadda laga soo celiyo si loo badbaadiyo Fahad Yaasiin oo ku eedeeysan af-duubka iyo dilka Ikraan.
Xildhibaan Mahad wuxuu xaqiijiyay in sidoo kale, Farmaajo dalbaday inuu soo magacabo Agaasimaha hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, taas oo ula jeedku yahay in la baabi’iyo kiiska gabadha maqan ku dhawaad saddexda bilood.
“Farmaajo wuxuu ku dheganyahay: Kiiska Ikraan Tahliil waa in maxkamada laga soo celiyo si Fahad loo badbaadiyo. Taliyaha NISA waa inaan anigu soo magacaabo, si loo baabi’iyo raadka kiiska Ikraan”! Ayuu yiri Mahad Salad.
Xildhibaankaan sida weyn uga soo hor jeeda, Kooxda Farmaajo, ayaa xusay in la helayo xogo hor leh oo haddii ay xaqiiqo noqdaan fadeexo iyo ceeb ku ah dowladnimada dalka.
“Kiiska Ikraan inta la malaynayo waa ka weyn yahay waxaana soo baxaya xogo hor leh oo hadii ay run noqdaan ceeb iyo foolxumo aan la arag oo la maqal ku ah Dowladnimada Soomaaliya, Dhaqankeena suuban iyo Diinteena Islaamka!” Ayuu sidoo kale yiri Mahad.
Hadalka Mahad Salaad, ayaa ku soo aadaya Xilli uu burburay shir lagu dhexdhexaadinayay Rooble iyo Farmaajo, kaas oo ay garwadeyn ka ahaayeen Madaxweynayasha dowlad goboleedyada Galmudug iyo Koofur galbeed.
Farmaajo, wuxuu diiday in kiiska Ikraan Tahliil Faarax, lagu sameeyo baaritaan madax-bannaan, loona daayo laamaha garsoorka, halka uu sidoo kale ka hor yimid magacaabiddii Sarreeye Guud, Bashiir Goobe, ee Ra’iisul Wasaare Roobe u magacabay Agaasimaha NISA, qodobaddas ayaana sabab u ahaa burburka wadahadallada.